OFFICIAL FIRMWARES And Drivers
Htet Aung Moe No comments
Internet Journal အတွဲ (၁၅)၊ အမှတ် (၈)
Htet Aung Moe JOURNALS No comments
ယခုတစ်ပတ်အတွက်ထွက်ရှိတဲ့Internet Journal အတွဲ (၁၅)၊ အမှတ် (၈)အားရယူနိုင်ပါပြီ....
Huawei U2800 Keypad လေး Firmware ပြန်တင်ရအောင်
Htet Aung Moe Android, HUAWEI No comments
ပိုစ့်ရေးသားသူ - Kaung Pyae(MMUG)
Down လို့ ရတဲ့ ထဲမှာ Doc နဲ့ Ver ပါပါတယ်
SD Card Format ချပါ Folder ဆောက်ပြီး update လို့ နာမည်ပေးပါ
Ver Folder ထဲက File တွေအားလုံး update Folder ထဲထည့်ပါ
Phone ကို 8+Power တွဲနှိပ်ပါ
Credit To - ကိုကောင်းပြည့်(MMUG)
Mobile Guide Issue 142
REF : Mobile Guide Journal
ယခုတစ်ပတ်အတွက်ထွက်ရှိတဲ့ Mobile Guide Issue 142 အားရယူနိုင်ပါပြီ...
Htet Aung Moe Android, Android Softwares No comments
MM Breaking New ကို MMSD ကနေ Free အနေနဲ့ ရေးထားတဲ့ Android App
လေးပါ။ ဒီ App ကနေ Internet Connection ရှိရုံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး
website များကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ App ကနေ ကြည့်နိုင်မဲ့
- အစိုးရနှင့်သက်ရောက်သော Website များဖြစ်တဲ့
- နည်းပညာ နှင့်ပတ်သက်သော Website များဖြစ်တဲ့
၈။ အာကာဖြိုး (နည်းပညာ)
၁၀။ သန်းတိုးအောင် (နည်းပညာမှတ်စု)
၁၂။ Internet For MM
၁၃။ Sayar Chan
- ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သော Website များဖြစ်တဲ့
၁၅။ Burmesr Classic
၁၆။ HTV အချက်အလက်
၂၀။ Public Health
- စာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောWebsite များဖြစ်တဲ့
၂၄။ Smile (ရသစာပေ)
၂၆။ မြန်မာတို့အတွက် ဗဟုသုတ
- သတင်းများဖတ်ရူရန်အကောင်းဆုံး Website များဖြစ်တဲ့
၂၉။ ၇ DAY News
၃၀။ Myawady News
၃၁။ The Free Note
၃၃။ DVB (Myanmar)
၃၄။ MRTV 4
၃၅။ The Voice Weekely
၃၇။ Myanmar CNN
၃၈။ Eleven Media
၃၉။ မဇ္စျိမ သတင်း
၄၀။ Myanmar Express
၄၁။ Today Myanmar
၄၂။ Opposit Eyes
၄၃။ Myanmar Forward
- ရုပ်ရှင်အနုပညာ သတင်းများနှင့်ပတ်သက်သော Website များဖြစ်တဲ့
၄၄။ SweSone Media Group
၄၅။ Popular Myanmar
၄၆။ Myanmar New Snow
၄၇။ The Facebook Time
၄၈။ Shwe New News
- ဖုန်းနည်းပညာကို လေ့လာလိုသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး Website များဖြစ်တဲ့
၅၀။ MMSD (Myanmar Mobile Software Developer)
၅၁။ MMAS (Myanmar Mobile Application Store)
၅၂။ Mobile Knowledge
၅၅။ Mobile House
၅၈။ Myanmar IDroid Free Download
၅၉။ Zealot Mobile Sharing
- မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Model များကို အကောင်းဆုံးကြည့်ရူနိုင်မည့် Website များဖြစ်တဲ့
၆၀။ Myanmar Celebrity
၆၁။ Myanamar Model
၆၂။ MM Girl
၆၃။ MM Sexy Girl
၆၅။ Cute Burmese Girl
၆၆။ Model Myanmar
- အသစ်ထွက်မြန်မာသီချင်းများကို အကောင်းဆုံး Download လုပ်နိုင်မည့် Website
၆၈။ Myanmar Muzic Box
၇၀။ Myanmar hip hop Channel
၇၁။ Myanmar Mp3
အစရှိသည့် Website ပေါင်းများစွာပါဝင်ပါသည်။
Google Play Store မှာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး Vote နဲ့ Review လေးရေးပေးပါအုံး
Made In Myanmar :)
Google Play ကဒေါင်းလို့မရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအောက်မှာတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်ပါတယ်...
Credit To - MMSD
Htet Aung Moe mobile knowledge No comments
Download ပြုလုပ်လို့မတတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ သူများအတွက် ဒေါင်းနည်းများတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...ကျနော်တို့
ဖိုင်တွေကိုတင်ရင် ADSL , WCDMA , CDMA , GSM ဒီအင်တာနက်လိုင်းများကို သုံးပြီးတော့သာ ဖိုင်တွေကိုတင်ပေးပါတယ်...တကယ်လို့မိမိဒေါင်းသည့်ဖိုင်သည် Access Denied ပြနေလျှင်မိမိရဲ့အင်တာ
- Download မရဘူးဆိုရင် "ဒေါင်းမရဘူး" လို့အော်သွားတာထက် မိမိကိုယ်တိုင်က မည်သို့မည်ပုံဒေါင်းတယ်..ဒေါင်းလိုက်ရင် ဘယ်လို Error တက်တယ်ဆိုတာ အသေးစိတ်ပြောစေချင်ပါတယ်..ဒီလိုအသေးစိတ် ပြောပြပေးသော Comment များကိုအမြန်ဆုံးစစ်ဆေးဖြေ
ရှင်းပေးမှာဖြစ်ပြီး ပြီးစလွယ်ပြောသွားသော Comment များကို စဉ်းစားဖြေရှင်းပေးမှာမဟုတ်ပါ..ကျနော်တို့
မှာ Download Link ပေါင်းများစွာကို ထိန်းချုပ်နေရတဲ့အတွက် အခုလိုပြောပြခိုင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
- Mediafire မှမတင်ခိုင်းပါနှင့်... နည်းပညာသမားများအတွက် Mediafire သည် မဟာရန်သူတော်ဖြစ်ပါ
တယ်.. အဲဒီမှာတင်တဲ့ဖိုင်တွေသည် ဒေါင်းရင်လွယ်ပါတယ်..မြန်ပါတယ်..Crack , Keygen ဖိုင်တွေအဲဒီ
ရသော Mediafire ဖြစ်ပါတယ်။
- မည်သည့်ဝါရင်သည့်နည်းပညာသမားမဆို တင်ထားသည့်ဖိုင်များ ကြာရှည်ခံမည့် နေရာများ ဥပမာ Solidfiles , Verzend.be , uppit.com , tusifles စသည်တို့ကိုသာရွေးချယ်ကြပါတယ်..အဲဒီမှာဘဲတင်ကြ
တာများပါတယ်..ဒီနေရာတွေက ဒေါင်းရတာအင်မတန်မှအဆင်ပြေပါတယ်... အခြားနိုင်ငံခြားဆိုဒ်တွေမှာ
လိုက်ဒေါင်းကြည့်ပါ...ဖိုင်လေးတစ်ခုကိုဒေါင်းရဖို့အတွက် ဘယ်လောက်တောင်ခက်ခဲသည်ဆိုတာ ဒေါင်း
- ဒါကြောင့် ဒါလောက်လွယ်ကူတဲ့နေရာများမှာတင်ထားပေးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေါင်းတဲ့သူဘက်က
လည်း မိမိရဲ့ညှစ်အားကို နည်းနည်းလောက်အသုံးပြုဖို့အကြံပြုပြောကြားလိုပါတယ်..
-နောက်ဆုံးပြောပြလိုတာက www.solidfiles.com မှာတင်ထားသည့်ဖိုင်များသည် အလွန်အင်မတန်မှ
Link သေခဲပါသည်..ဒေါင်းရတာလဲအဆင်ပြေပါသည်..သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံ 505 Tempo Error တက်
ပြီးဒေါင်းမရဖြစ်တတ်ပါသည်..ထိုသို့ဖြစ်ရင် နောက် 24 နာရီပြည့်မှ လာဒေါင်းပါ..ဒါမှမဟုတ် အခြားနေရာ
နယ်မြေက သူငယ်ချင်းကိုဒေါင်းခိုင်းပြီး အခြားမိမိနှစ်သက်တဲ့နေရာမှာပြန်တင်ခိုင်းပါ..
-နည်းပညာသမားများကတော့ အများအတွက်..ရေရှည်အတွက် ကိုကြည့်ပြီး Link သေခဲသည့်နေရာများ
တွင်သာ တင်ကြမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်...အလွယ်ရတဲ့နေရာမှာတင်လို့ Link သေသွားရင် ဘယ်လိုမှပြန်တင်
ဖို့မလွယ်ကူသလို..Website ပိုင်ရှင်အပေါ်ကိုလည်း လေးစားမှု အားထားမှုလျော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်..
ထို့အပြင် စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ မြန်မာအင်တာနက်လိုင်းကိုအသုံးပြုနေကြခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် နောက်
တစ်ခါထပ်တင်ပေးဖို့က ပိုလိုတောင်မဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်...အခု Download ပြုလုပ်နည်းများတင်ပေး
Download လင့်တွေကို Adf.ly လေးနဲ့ခံထားတာကို
ဥပမာ http://adf.ly/Pq94y လင့်မျိုးပေါ့
5 second လောက်စောင့်ပေးရမယ်
Adfoc.us လည်းဒီအတိုင်းပါဘဲ...6စက္ကန့်စောင့်ပြီး SKIP နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဒေါင်းရမယ့်နေရာကို ရောက်ပါလိမ့်မယ်.. SKIP မပေါ်ဘူးဆိုရင် ထပ်မံပြီး Loading ပြန်လုပ်ပါပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
6စက္ကန့်စောင့်ပြီး Generate Link ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Download ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ
Slow Download ဆိုတာကို နှိပ်ပြီးဒေါင်းရုံပါ
Download ( MB ) ဆိုတဲ့ခလုပ်အစိမ်းကိုနှိပ်ပါ
တစ်ခါတစ်ရံ 505 Tempo Error တက်လျှင်ဒေါင်းမရတတ်ပါ.. Link သေတာမဟုတ်ပါဘူး..နောက်တစ်နေ့မှဒေါင်းပါ။
4Shared မှာ Download ပြုလုပ်ချင်ရင်တော့ http://www.mmithelper.com/2013/09/4-shared-download.html မှာကြည့်ပါ
Credit To - ( Myanmar IT Helper )
Htet Aung Moe Android, ROOT TOOLS No comments
Ref : MPX Team
Samsung 4.3 S3/S4/Note 2/ Note3Devices တွေကို Knox 0*0 ဖြစ်အောင်လို့ကို
root လို့ရပါမယ် ဒါဆို warranty လည်းမပျက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ
smaung usb driver ရှိရမယ်
debugging on ထားရမယ်
bat file လေးကိုဘဲ run ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် လွယ်လွယ်လေးပါ
Mobile USB Drivers v2.0
Htet Aung Moe Android Pc Suite No comments
Mobile Driver တွေရှာဖွေရတာလွယ်ကူအောင်လို့ကိုစိုးဝင်းကနေပြီးတော့Mobile USB Driver 2.0
build by : soe win
Credit To - Ko Soe Win
၅.၅ လက်မ HTC Desire 8
Htet Aung Moe Mobile News No comments
HTC က မကြာမီ မှာ Desire မျိုးဆက် စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးကို ထုတ်ဖော်ပြသမယ့် ပုံပေါ်ပါတယ်။ အဲဒီဖုန်း ရဲ့ Specification တွေနဲ့ ဓာတ်ပုံ တွေ ထွက်ရှိလာပါတယ်။ HTC Desire 8 ဖြစ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် အလယ်အလတ် ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ပေါ်လာ တဲ့ သတင်းအရ ၅.၅ လက်မအရွယ် Display တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Android 4.4 KitKat လည်ပတ်မောင်းနှင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ 13 Megapixel Camera ကို အနောက်ဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ5Megapixel Camera တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ စပီကာ နှစ်ခု ပါရှိပြီး SIM Card နှစ်ခု အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပလတ်စတစ် ကိုယ်ထည် ကို အသုံးပြုထားပြီး အနီ၊ လိမ္မော် ၊ အ၀ါ ၊ အပြာ ရောင်များ ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Home, Back ,Menu Button များကို On-Screen ခလုတ်များအနေဖြင့် အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ ထဲမှာ March 18 နဲ့ ဘေဂျင်း တည်နေရာ ကိုဖော်ပြထားတဲ့အတွက် ဒီလ ထဲမှာ ကျင်းပမယ့် Mobile World Congress မှာ Desire 8 ကို ထုတ်ဖော်ပြသမှာမဟုတ်ဘဲ March လမှသာ ဘေဂျင်း မှာ ထုတ်ဖော်ပြသမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ HTC က Desire 8 ကို အာရှ မှာ အဓိက ရောင်းချဖို့ ရည်ရွယ်ထားပုံရပါတယ်။
အငြင်းပွားဖွယ် မရှိတဲ့ သတ္တုများ အသုံးပြုဟု Apple အခိုင်အမာ ပြောဆို
Ref : Smart Pro Journal
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က ကုမ္ပဏီရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် Apple ဟာသူရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေမှာ သတ္တုအသုံးပြုမူကို အငြင်းပွားဖွယ်မရှိနိင်တဲ့ သတ္တုတွေကို
အသုံးပြုလျက်ရှိတယ်လို့ Third-party စာရင်းစစ်သူများရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။
ထို့ သတင်းကတော့ ကုမ္ပဏီကို ထောက်ပံထားတဲ့အချိတ်အဆက်ထဲမှာပါဝင်ပြီး multi level မှာရှိတဲ့ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း 451ပေါ်မှာ အခြေခံထား
Apple ရဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ i Phone မှာဆိုရင်တော့ အာဖရိကတိုက်ဖက်ခြမ်း၊ ကွန်ဂိုနိင်ငံမှ မြောက်မြားစွာလာလေ့ရှိသော Tantalum ( tantalium) သတ္တု
တစ်မျိုးကို အသုံးပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထို သတ္တုဟာဆိုရင် ဓာတု element တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဓာတုဗေဒနာမည် သင်္ကတ Ta ဖြင့်ဖော်ပြလေ့ရှိကာ atomic number
ကတော့ 73 ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ သတ္တုဟာဆိုရင် ထိုဒေသမှာ ရှိတဲ့ သူပုန်အုပ်စုအချို့နဲ့ ပြသာနာ အနည်းငယ်ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Apple ဟာ သတ္တုကျိုချက်ရေးနဲ့ သန့်စင်ရေးတွေမှာ ပါတဲ့ သတ္တုတွေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ Tin လို့ခေါ်တဲ့ သံဖြူဒြပ်စင်၊ tantalum ၊ အဖြိုက်နက်၊
ရွှေ စသည့်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Mobile world congress မတိုင်ခင် ယခုလောလောလတ်လတ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ သတင်းလေးပါ။ Sony ရဲ့ အသစ်စစ်စစ် အလတ်စားအဆင့်မှာ ရှိတဲ့ Flagship
ယခုလအတွင်း မကြာမီလာမည့် MWC မှာတရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြသမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားရပါတယ်။
ယခုတွေ့ရှိရတဲ့ ဓာတ်ပုံ နှစ်ပုံကတော့ Xperia Gရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အချို့ကို ၀ိုးတ၀ါးဖြစ်စေမူတွေနဲ့အတူပေါ်ထွက်လာပြီး ပြောဆိုနိင်စေခဲ့ပါတယ်။
LTE, အတွင်းမှတ်ဥာဏ် 8GB, 8 megapixel ကင်မရာ ဖြစ်ပြီး 4.8 လက်မရှိတဲ့ မျက်နှာပြင် ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုပါ။
အပြင်ပိုင်းတွေအနေနဲ့ကတော့ သေးသွယ်ပါးလွှာတဲ့ ဆိုဒ်နဲ့ အရင်ထွက်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ Xperia Z1S ရဲ့တူညီတဲ့ ဒီဇိုင်းတို့ဖြင့် အလယ်အလတ်အစားရှိတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့
G ကို ဖြစ်စေနိင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ထို ဖုန်းရဲ့ပုံတွေဟာ ဒီထက်ပိုတဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက် တိတိကျကျကို ထပ်မံပြောပြနိင်ဖို့ လျော့နည်းနေပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ မကြာတော့တဲ့ နောက်တစ်ပတ်လောက်မှာ ထိှု့Sony Xperia G အကြောင်းနဲ့ ဈေးနှုန်းတိတိကျကျတို့ကို သိနိင်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Nokia ဟန်းစက်တွေကိုမှ ကိုင်ချင်ကြသူများ အတွက် Nokia X လို့ခေါ်ဝေါ်တဲ့ အစိမ်းရောင်လေး ထွက်ပေါ်လို့ လာပြန်ပါပြီ။ Nokia ဆိုသည့်အတွက် အသုံးပြုရတာ အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာပြင် ၄ လက်မဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့် သယ်ဆောင်ရ အဆင်ပြေစေမယ့် ဟန်းစက်တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ Processor ကတော့ Qualcomm S4 ဖြစ်ပြီး ကင်မရာ အနေနဲ့ကတော့ 3-megapixel ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် storage ပိုင်းကို 4GB သုံးထားပြီး RAM ကတော့ 512MB ဖြစ်ပါတယ်။ microSD ကို တိုးချဲ့ပြီး အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ ကြာရှည်ခံအောင် ဘတ္တရီကို 1500mAh အသုံးပြုထား ပါတယ်။
Android ဗားရှင်းကတော့ အနည်းငယ် နိမ့်သောလည်း အဆင်ပြေစေမှာပါ။ Android ဗားရှင်းကတော့ 4.1 ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုစ့်ရေးသားသူ - ကျော်လင်းနိုင် (www.smart.com.mm)
Zapya ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတာ ပြောစရာမလိုလောက်တော့ဘူးနဲ့ တူတယ်။
အခု update လေးတွေ့ လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အောက်ကလိပ်စာမှာ
Htet Aung Moe Mobile Hardware No comments
Viber v4.2.1.1 Apk 19Mb
Viber အသုံးပြု တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် update လေးပါ အသစ်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် အောက်က လင့်မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်
Donate US On MyanPay
MOMO Table Firmware တွေကိုစုံစုံလင်လင်တင်ပေးထားပါတယ်......Firmware တင်နည်းကိုတော့မပြောတော့ဘူးနော် အခက်ခဲရှိတယ်ဆိုရင် Comment မှာပြောခြဲ့...
Huawei C8813 , C8813D Network Unlock Tool
MEC Card မတက်တဲ့ C8813 & C8813d များအတွက် Kyaw Swar Twin ရေးထားတဲ့ Tool လေးပါ အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် . .လိုအပ်ရင်ေ...
Huawei G610-U00 ကို SP Flash Tool သုံးပြီး Firmware တင်နည်း
Post By Hein Maung (MMAS Mobile Service Training Team) အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ G610-U00 က MTK အလုံးပါ အဲ့တော့ ...
iOS7တွင် JailBreakမလုပ်ဘဲ Zawgyi Font သွင်းနုိုင်ပြီ
မြန်မာစာထည့်သွင်းနည်း(၁) iO7 တွင် JailBreak လုပ်စရာမလိုပဲ zawgyi font သွင်းနုိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်စမ်းပြီးပါပြီ။ Browser မ...
Huawei G730-U00 & C00 အတွက် မြန်မာစာဖောင့်ပါ။ လောလောဆယ် Frozen Keyboard နဲ့ အဆင်မပြေသေးပါဘူး။ Bagan Keyboard နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ Fon...
Copyright ©2013 ပျဉ်မနားသား. Created By Htet Aung Moe(P.M.A). Powered by Blogger.
Copyright © 2013 ပျဉ်းမနားသား ၊Designed By: ပျဉ်းမနားသား . မူပိုင် ပျဉ်းမနားသား :၊1.9.2013တင်စတင်တည်ထောင်သည်။